5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी-17 Bosse द्वारा "बो" Petersson - स्टकहोम, स्वीडेन | आउटबोर्ड नाव मोटर मरम्मत
5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी- 17 Bosse "बो" Petersson - स्टकहोम, स्वीडेन द्वारा
बुझाउने ttravis on सूर्य, 10 / 28 / 2018 - 21: 14
यो यो साइटको एक मित्र भएको छ किनभने यो सुरू भएको छ र मेरो लागि एक प्रेरणा यो साइट अतीत 13 वर्षहरूमा जाँदै राख्न को लागी।
पेस गरिएको आउटबोर्ड-बोट-मोटर-मरम्मत फेसबुक पेज नोभेम्बर 1, 2009।
1960 5.5 को लागि पसल HP जस्टन सीडी-17 पार्ट्स
म तिमीलाई धेरै प्रशंसा दिन चाहन्छु र तपाईंको धेरै राम्रो लागी धेरै धन्यवाद
साइट, र टुन अप लेखहरू।
मैले उनीहरूको व्यापक प्रयोग गरेको छु, र उनीहरू सधैं त्यहाँ समाधान गर्न थिए
पहिलो आउटबोर्ड मरम्मतमा प्रश्नहरू मैले गरेका छन्।
Mech। पेशामा ईन्जिनियर, मैले 38 वर्षको लागि ईन्धन इंजेक्शनको साथ काम गरे
स्वीडेनमा उपकरण (बश) अर्थात् यानी, टेक्नोलोजी बिक्री र ग्याँसको लागि आवेदन
र डीजल इन्जिन।
तथापि, व्यावहारिक र सैद्धांतिक दुवै अब सम्म, म लगभग मात्र छ
4-स्ट्रोक डीजल र ग्याँस इन्जिनको साथ काम गरिरहेको छ।
अन्तिम पतन हामीले हाम्रो 4'का लागि डुङ्गाको लागि 6-14 एचपी आउटबोर्डको बारेमा विज्ञापित गरेका छौं।
एउटा उत्तर प्राप्त गर्दै, हामीले हाम्रो टापुमा जॉनसन सेरार्स 5.5hp खरिद गर्यौ
स्टकहोम, स्वीडेन बाहिर बाल्टिक सागर। इन्जिन बदल्न सकिन्छ, त्यसैले मैले सोधें
मानिस यदि यो दौड्यो भने। "हो, केही दुई वर्ष पहिले", उनले जवाफ दिए, त्यसैले हामीले यो किन्नुभयो
55 $ को लागि।
सानो जॉनसन सीडीएक्सएनएनमक्स (17) सीरियल नम्बर बी 1960 संग छ, जुन थियो
युरोपेली बजारको लागि बेल्जियमको जॉनसन कारखानामा बनाइयो।
ट्युन अप अप वास्तविक चुनौती हुन कहिलेकाहीँ सामान्यतया भन्दा बाहिर।
घरमा हामीले टिनमा 80% पानी पार्यौं, सिलेंडर हेड दरबार "mended" सँग
धेरै सिलिकॉन, अटकको कारण overheating (हराएको रंग) को चिन्ह
थर्मोस्टेट। यसरी, इन्जिन "grave" को नजिकै धेरै थियो। स्पार्क प्लग,
तथापि, नयाँ थिए र राम्रो अनुहार थियो, त्यसैले मैले "मिशन प्रयास गर्ने निर्णय गरे"
पहिलो चीजको टाउको ठोक्किएको बोल्ट बोरमा सानो थियो
एल्युमिनियम ट्यूब, र नजिकैको कपाल पतली पानी जैकेट दरार "स्थायी" LocTite संग इंजेक्शन गरिएको थियो। ग्लास फाइबर भरिएको प्लास्टिकको सुदृढीकरण प्लास्टिक
(प्लास्टिक पैडिंग) अपरेशन समाप्त भयो।
आउटबोर्ड अलग गरेर, छ (दसौं) सिलेंडर बोल्ट र एक (सात)
पावर टाउको विभाजनमा बोल्ट र कम एकाइ तोडिएको छ। साथ पनि
यी थ्रेडहरूको सावधान ड्रिलिङ उनीहरूलाई शीर्षमा बचत गर्न सम्भव थिएन
गुणस्तर। समस्या 8,5mm बोरहरू ड्रिल गरेर हल गरियो, र तिनीहरूलाई थ्रेड गर्न
M10 थ्रेड बिटको साथ। M10 टाढाको रोडहरू ¼ "युएनसी थ्रेडहरूसँग थिए
सम्मिलित, "स्थायी" LocTite संग निश्चित।
दुवै coils भरी भयो, र एक छोटो थियो, ईंन्धन लाइनहरू, कडा थर्मोस्टेट,
जस्तो भनिएको छ, अटकिएको थियो, प्रोभेलर लुगा लगाइरहेको छ। रूपमा प्रवर्धक आवास भारी थियो
पहेंलो र लुगा लगाइयो, यो क्षेत्र सुक्खाएको थियो, भरिएको, र आंशिक रूपमा निर्माण
ग्लास फाइबर संग प्लास्टिक प्याडिंग भरिएको छ
अझ पनि खराब, उच्च गति सुई फटाएको र सम्बन्धित थ्रेडमा
फ्लोट कटोरा नष्ट भयो। मैले मेरो लम्बाइमा एउटा नयाँ पीतल सुई बनाएँ
फ्लोट कटोराको लागि पीतल सम्मिलित गर्नुहोस्।
नयाँ जास्क (हेड, ड्राइफहाउस, थर्मोस्टैट), थर्मोस्टैट, प्रोभेलर, कन्फल,
condensers, अंकहरू, कार्बोरेटर किट (प्लास्टिक फ्लोट थपिएको) नयाँ ईन्धन रेखाहरू,
स्पार्क प्लग तार र टोपहरू स्थापित गरियो। वैसे, मैले स्टेनलेस रोजें
सिलेंडर सिरको लागि इस्पात बोल्ट। तिनीहरू जंगली छैनन्, त्यसैले तिनीहरू सजिलो छन्
बाहिर निकाल्नुहोस्। मलाई आशा छ, मलाई उनीहरूको बिरोधको आवश्यकता पर्दैन।
मैले LocTite / Permatex फारम-ए-ग्याँसकेट सबै थ्रेड र पानीमा प्रयोग गरे
सबै काम गरेपछि यो सजिलो सुचारु हुन्छ, ठुलो, मूर्तिहरू, पहिला सुरु हुन्छ र,
यद्यपि प्रारम्भ देखि इरादा छैन, यो नयाँ पेंट गरिएको थियो र यो जस्तो देखिन्छ
शो कोठाबाट बाहिर आउँदैछ। कुल लागत 400 $ र मेरो आफ्नै काम हो, तर
यस पुनर्स्थापनाको आनन्द मलाई पूर्ण मुआवजा दिएको छ र
त्यो # 28 ले कसरी चित्रण चित्रकारी भन्दा अगाडि देखा पर्यो।
8,5mm बोर, ड्रिलिंग #48, M10 सँग सूत्र गर्नु अघि जस्तै #49 मा। थ्रेड गरिएको रोड ¼ "युएनसी थ्रेडहरू, जो ल्हाथमा बनाइयो, # 34 मा देख्न सकिन्छ।
नजिकैको पाइप सम्मिलित भएको टाउकोको टाउको एक बोल्ट बोरहरू मध्ये, #42। प्रशस्त र "प्लास्टिक Padding", #43 को साथ आउटलेट मा निर्माण।
# 45 र #47 मा H / S सुई देखाउँदै।
तस्विरमा #44 नयाँ एच / एस सुई, केहि हदसम्म लामो, विभाजन गर्नु अघि, पिरोया बोर र कोण तालाकार पेंचको लागि। कटोरा मा पिरोया हुआ पीतल सम्मिलित को एक झलक पनि देख्न सकिन्छ। पुरानो कार्क फ्लोट राम्रो परिस्थितिमा थियो र सुरुमा गोलाका तीन तहहरूसँग लक्चर गरिएको थियो।
हामीले सामान्यको सट्टा एल्लेलेट पेट्रोल प्रयोग गर्यौं, यो ठीक थियो। यद्यपि सिजन पछि, मैले'94 प्लास्टिक फ्लोट 'मा परिवर्तन गरें, त्यसैले हामी सस्तो मानक पेट्रोलसँग चलाउन सक्छौं।
संलग्न चित्रहरूले मेरो पुनर्स्थापित जॉनसन सेहर्सो 5.5 एचपी भूमिमा देखाउँछ र हाम्रो हरित एक्सएनमक्सक्स पङ्क्तिको डुङ्गामा घुमाउँदा, 'सिल्जन' टाइप गर्नुहोस् 'जेएनएएमएक्सएक्स' बाट सुरु भएको "JOFA" टाइप गर्नुहोस्। 14 $ को लागि एक प्रयोग नगरिएको फ्रिजको रूपमा खरिद गरियो। भाग्य को स्ट्रोक को रूप मा, "JOFA" "जॉनसन फ्याब्रेकर" (कारखाना) को लागि खडा छ। यद्यपि, यो ओएमसी संग केहि गर्न छैन, तर शायद आइस हकी हेलमेट र अन्य प्लास्टिक र खेल उपकरण बनाउन को लागि जानिन्छ।
जस्तो कि तपाईंले देख्न सक्नु भएको छ कि म बाहिरको साधन को लागी सानो ट्राफिक गाड़ी प्रयोग गर्दछु। पेंट लगभग प्राइमर मा स्प्रे डिब्बे देखि लगभग मौलिक (अडी 90 सेतो) छ। इन्जिनको कालो पट्टीले धरानका चित्रहरूमा असफल भए तर पछिका चित्रहरूमा थपिएको छ। इन्जिन आवरणमा पनि, मैले #27 मा अनुहारको प्लेट वरिपरि पुरानो रबड फ्रेमहरू खारेज गरे।
म नयाँहरुलाई साटो साकार गर्दछु। सम्पूर्णको रूपमा, केही मित्रहरूले भने - "... यो आउटबोर्डले ब्रान्ड नयाँ देख्छ" ...!
मेरो भव्य छोरा शमूएल (8) को रूपमा #78 मा देखा पर्यो मज्जाले मजाक गर्दछ र यहाँ मेरो भाई हम्पस (5) को साथ पनि।
म हाम्रो सानो पुल #5 मा बे, "म्यास्निंग" को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ। बे, बरु ठूलो, 20x45 किलोमिटर हाम्रो द्वीप ओर्नमा सुरु हुन्छ र यो बाल्टिक सागर (0.7% नमक) को भाग हो। बाल्टिक भन्दा ठूलो छ, 1300x 400 किमी। द्वीप स्टकहोम द्वीपपट्टीको लगभग सबैभन्दा ठूलो द्वीप हो, जुन 25.000 ठूला र साना द्वीपहरू छन्!
मैले धेरै चित्रहरू पठाएँ, र तपाईंले तिनीहरूलाई मनपराउन सक्नुहुनेछ। तपाईंसँग यो सम्पर्क सुरू गर्न यो धेरै मज्जा आएको छ।
एक पटक फेरि, तपाईंको उत्कृष्ट लेख र तस्विर बिना मैले यो धेरै रमाइलो थिएन।
म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु, र आशा छ कि तस्वीरहरु मनपर्छ ...
राम्रो काम जारी राख्नुहोस्।
परियोजना अहिले धेरै वर्ष पछि परियोजना चलिरहेको छ।
बो को भिडियो र उनको बोट र मोटर हेर्नुहोस्
बुझाउने फिशर मा मंगल, 04 / 16 / 2019 - 21: 54
अति उत्तम अय्यूब सर
विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमरीकामा एउटै इकाई यहाँ बहाल गर्दै। तपाईंको पोस्ट र फोटोहरू मजा लिनुहोस्। बाडेको मा धन्यवाद।